A Thousand Words (2012) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဒီနတေ့ော့ တကယျကိုကောငျးတယျ့ဇာတျကားလေးတငျပေးလိုကျပါတယျ။ Box Office မှာ အမရေိကနျဒျေါလာ 22 သနျးဝငျခဲ့တဲ့ကားဆိုလညျးမမှားပါဘူး။
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ တဈကိုယျကောငျးဆနျပွီး ကိုယျ့အတှကျကိုပဲကွညျ့တတျတဲ့ စာတိုကျမှ အေးဂငျြ့တဈယောကျ၊ သူအောငျမွငျနရေတဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးက တဈခွားသူကို စကားပွောခှငျ့မပေးပဲ ကိုယျပွောခငျြရာပွောပွီးလုပျတတျသောသူ၊ တဈနအေိ့မျရှမှေ့ာထူးဆနျးတဲ့ သဈပငျကွီးတဈခုပေါကျလာခဲ့တယျ။ သဈပငျကွီးက အဆိုပါအေးဂငျြနဲ့ဆကျနှယျနပွေီး စကားတဈလုံး ပွောတိုငျးသဈရှကျလေးကွှပွေီးတော့ နောကျဆုံးသဈရှကျလေးကွှတေဲ့အခါ သရေမယျလို့ သိလိုကျရတဲ့အခါ……………………. အရမျးကောငျးတဲ့ဟာသဇာတျလမျးလေးမို့ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျပါဦး။
ဒီနေ့တော့ တကယ်ကိုကောင်းတယ့်ဇာတ်ကားလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Box Office မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 22 သန်းဝင်ခဲ့တဲ့ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲကြည့်တတ်တဲ့ စာတိုက်မှ အေးဂျင့်တစ်ယောက်၊ သူအောင်မြင်နေရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက တစ်ခြားသူကို စကားပြောခွင့်မပေးပဲ ကိုယ်ပြောချင်ရာပြောပြီးလုပ်တတ်သောသူ၊ တစ်နေ့အိမ်ရှေ့မှာထူးဆန်းတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတစ်ခုပေါက်လာခဲ့တယ်။ သစ်ပင်ကြီးက အဆိုပါအေးဂျင်နဲ့ဆက်နွယ်နေပြီး စကားတစ်လုံး ပြောတိုင်းသစ်ရွက်လေးကြွေပြီးတော့ နောက်ဆုံးသစ်ရွက်လေးကြွေတဲ့အခါ သေရမယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့အခါ……………………. အရမ်းကောင်းတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းလေးမို့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး။
Option 1 uptomega.com 434 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 434 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 434 MB SD (480p)
Option4drive.google.com 434 MB SD (480p)
Option5drive.google.com 434 MB SD (480p)
Option6uptomega.com 1 GB HD
Option 13 drive.google.com 2.5 GB FHD DTS 5.1
Option 15 sharer.pw 2.5 GB FHD DTS 5.1